Famatsiana ny fampiofanana matihanina, toro-lalana mahomby
Posted by Tranquillus | Jul 19, 2018 | Online training
Ny vidin'ny fanabeazana na ny fanofanana amin'ny asa dia matetika dia sakana amin'ny fandinihana ny fahaiza-manao mba hahitana asa mora. Maro ny olona tsy manana fitaovana enti-manofana fiofanana amin'ny fianarana ary maro no mbola tsy mahalala Ahoana ny fomba hanamafisana ny fampiofanana amin'ny fianarana?. Na izany aza, dia misy tetika maro milefitra amin'ny famatsiam-bola na ny fiofanana matihanina rehetra. Ireo orinasa na tsia, dia napetraka mba hiaraka aminao amin'ny ezaka ataonao. Ireto misy fampahalalana sy toro-hevitra sasantsasany mba hitarika anao mora foana fanampiana ara-bola ho an'ny fampiofanana amin'ny asa.
Nahoana no manaraka fanofanana matihanina?
Antony maromaro manamarina ny safidy haka fampiofanana amin'ny asa, ny voalohany dia ny hahita asa mora kokoa. Ao amin'ny orinasa na orinasam-panjakana, ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao matihanina amin'ny sehatra iray voafaritra dia mety ho fiatoana fanavaozana.
Ny tsy fananana fiofanana mahafeno ny filan'ny orinasa dia fitifirana, na inona na inona fahafahanao manova sy manavao. Manaova fampiofanana amin'ny asa dia ahafahanao manatsara ny fiainanao ary mijery ny tanjon'ny asa ho anao. Fampiofanana ara-pitaovana fanampiny dia azo atao mandritra ny fotoan'ny hariva mandritra ny fotoana fohy ao anatiny na ivelany (ao amin'ny orinasa) ary ahafahana mahazo fahaiza-manao vaovao.
Azonao atao ihany koa ny manaraka fanofanana matihanina mba hiverina amin'ny andro, mamelà ny fahatsiarovanao. Ny fivoaran'ny tontolo sy ny teknolojia dia mety mitaky fanavaozana, indrindra raha misy olona efa nanaraka ny fianarany am-polony taona lasa izay. Ny fahalalantsika amin'izao fotoana dia mety tsy ho amin'ny daty ary hampiofana ny fahombiazany ny fampiofanana. Ny fampiofanana fanavaozana dia asaina isaky ny taona 5 mba hitazonana ny mpiasa amin'ny tsara indrindra amin'ny fahaizany.
Farany, ny fampiofanana matihanina dia azo ampiasaina hanavaozana na hiverina amin'ny sehatra hafa. Ny fampiofanana amin'ny sehatra voakasik'izany dia ahafahan'ny fiovan'ny toetr'andro. Mety ho sarotra sy mandany fotoana be izao ny fizotry ny fanarenana, nefa mahafa-po ihany koa rehefa mahomby ny fampiofanana.
Inona no lanja tokony homena amin'ny fiofanana arak'asa?
Raha ny marina, ny fanatrehana fampiofanana dia manome lanja fanampiny ho an'ny mpiasa na ny mpikaroka momba ny asa, ny orinasa dia mandray tombony amin'ny fampiofanana ny mpiasa. Momba ny mpiasa, ny fiofanana matihanina manatsara ny CV, mamela ny fivoaran'ny tena manokana sy matihany. Izany dia ahafahana mahazo fahombiazana sy fampivelarana ny fahaiza-manaony ho an'ny fampandrosoana maharitra. Araho a fampiofanana amin'ny asa dia valera eo amin'ny sehatry ny fampiasana tsaratsara kokoa ny olona iray, ny mpanolotsaina, ny solontenan'ny sampan-draharaham-panjakana, ny mpanelanelana, ny dokotera, ny liberaly matihanina, sns.
Fampiofanana arak'asa: famahanana ireo mitady asa.
For a fanampiana amin'ny famatsiam-bola ny fanabeazana ho an'ny olon-dehibe, ny mpikaroka dia mety hanao fianarana matihanina na hampivelatra ny fahalalany na hiova ho any amin'ny sehatra hafa. Ireo mpanolotsaina an'i Pôle Emploi dia fanampiana lehibe hitadiavana bola ho an'ny fanabeazana ho an'ny olon-dehibe ary hitarika ny olona mitady ny asa.
HAMAKY Maxicours: ny fijerena ny lesona an-tserasera mora
Io farany io dia afaka miezaka koa mitady fanampiana ara-bola amin'ny alàlan'ny fitaovany. for fanofanana fiofanana momba ny asa, dia maro ireo fanampiana mety ho an'ny mpikaroka.
Noho izany, raha efa nahazo fiofanana ora maromaro ianao ao amin'ny kaonty fanofanana manokana anao (CPF) mandritra ny vanim-potoanao, dia afaka mandray soa avy amin'ny ora fiofanana maimaim-poana ianao. Ity fotoana malalaka ity dia mety hampihenana ny vidin'ny fampiofanana matihanina.
Ny fiverenana any amin'ny Fampiofanana momba ny asa (AREF) dia afaka mandany ihany koa ny ampahany amin'ny fampiofanana azonao amin'ny fianarana, izay valin'ny Pôle Emploi. Noho izany, handray soa ny mpilatsaka an-tsitrapo mandritra ny fampiofanana AREF ny habeny dia mitovy amin'ny an'ny AER (Fiverenana amin'ny asa fanampiana) ary vola isam-bolana.
Tetika hafa maro hafa no ahafahan'ireo mitady asa hahazo famatsiam-bola amin'ny fanofanana arak'asa. Anisan’izany, anisan’izany ny Action Training Before Recruitment (AFPR), Fanomanana amin’ny asa ho an’ny tsirairay (POEI), Actions Training Contracted (AFC), Assistance fanofanana manokana.
Ny Filan-kevim-paritra dia manolotra fanampiana ara-bola manokana ho an'ireo mpanolotsaina mba hahafahany manaraka fanofanana matihanina amin'ny alàlan'ny diplaoma voasoratra ao amin'ny RNCP (National Directory of Certifications). Ireo taranja dia manohana tanteraka ny Filankevitry ny faritra ao anatin'ny faran'ny takona araka ny fampiofanana. Ho tombontsoan'io fanampiana io dia tsy maintsy voasoratra ao amin'ny Pôle Emploi ianao ary miaina ao amin'ny faritra voakasik'izany.
Ireo mpiasan'ny fahasalamana dia mandray soa avy amin'ny Agefiph ary ny fanampiana ara-bola isan-karazany dia omen'ny lapan'ny tanàna, ny CAF, ny filan-kevitry ny departemanta, amin'ny tranga iray.
Famatsiam-bola "fiofanana matihanina" ho an'ny mpiasa
Ny toe-javatra dia hafa samy hafa arakaraka ny mpiasa iray maharitra, mpiasa an-trano na mpiasan'ny fotoana iray. ny famatsiam-bola "fiofanana arak'asa" ho an'ny mpiasa maharitra dia azo atao raha toa ka efa niasa nandritra ny 24 volana na 36 volana farafahakeliny ho an'ireo orinasa mpanao asa-tanana manana mpiasa latsaky ny 10. Ny famatsiam-bola amin'ny fampiofanana anao dia mety ho feno raha misy drafitra fanofanana kasaina hatao ao anatin'ny orinasanao. Tsy mila miahiahy momba ny famatsiam-bola araka izany ny mpiasa. Ny mpiasa amin'ny fifanarahana maharitra dia afaka mahazo tombony amin'ny fiofanana arak'asa amin'ny fepetra sasany.
Azo antoka aloha fa niasa fara fahakeliny 24 5 volana tao anatin'ny taona vitsivitsy, dia tsy maintsy ihany koa efa niasa nandritra ny volana 4 ao amin 'ny taona sy ny taona manaraka ny faran'ny CSD. Ao amin'ny vonjimaika, ny Fanofanana Insurance Fund asa vonjimaika mamela ny fikambanana ho ara-bola hanampiana ny mpiasa vonjimaika ny manao fiofanana arak'asa.
Amin'ny toe-javatra rehetra, ny mpiasa dia mahazo fanampiana ara-bola ho an'ny fampiofanana azy ao anatin'ny kaonty fanofanana manokana (CPF), drafitry ny fiofanana momba ny orinasa (PFE), fialan-tsasatra fanofanana manokana (CIF) ), fianarana fianarana. Raha toa ny mpiasa na mpanelanelana manana ora maromaro voarakitra ao amin'ny kaonty CPF, dia afaka mandray soa avy amin'ny famatsiam-bola "fiofanana arak'asa" izay karaman'ny mpampiasa azy sy ny OPCA amin'ny 50% maximum.
HAMAKY Fampisehoana ny sehatra fampiarana an-tserasera iBellule
Training mety hatao amin'ny fotoana sy miasa amin'ity tranga ity, dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavan'ny ny mpampiasa 60 andro mialoha ho an'ny fampiofanana eo ambany 6 120 volana sy ny andro ny fiofanana, raha maharitra kokoa noho ny 6 volana. Ny mpampiasa dia manana 30 andro hamaly fa raha mangina ny farany, ny fangatahana dia eken'ny toerana misy anao. Raha toa ny fiofanana atao ivelan'ny ora fiasàna, dia tsy ilaina ny fifanarahana amin'ny mpampiasa.
Ao anatin'ny EFP, ny orinasa dia manana adidy hiantohana ny fampiofanana tsy tapaka ny mpiasa amin'ny toerana misy azy ary tsy maintsy miantoka ny fivelarany ao amin'ny orinasa. Noho izany dia takiana amin'ny mpampiasa ny hampiofanana io vokatra io amin'ny mpiasa. Na izany aza, ny Drafitr'asa Fanofanana dia tsy ara-dalàna ary amin'ny fangatahan'ny orinasa, ny mpampiasa, ny fiarahamonina na ny fitantanana. Ny mpiara-miasa ao amin'ny PFE dia mitazona ny karamany mandritra ny fotoana fampiofanana ary ny vola fanampiny amin'ny fampiofanana (trano, fitsangatsanganana, sakafo, sns) dia andraikitry ny mpampiasa.
Ny CIF ho azy dia fialan-tsiny mamela ny mpiasa tsy hiala amin'ny asany mandritra ny fe-potoana manokana mba hanarahana fanofanana matihanina ary hampivelatra ny fahaizany na ny fiverenana. Ny CIF dia sahala amin'ny PFE dia amin'ny fandraisan'andraikitra amin'ny mpiasa ary nomena ny fankatoavan'ny mpampiasa. Na izany aza, ny mpiasa dia mbola mitazona ny karamany mandritra ny fotoana fampiofanana, na dia misy raharaham-barotra aza tsy mitovy amin'ny an'ny orinasany. Ny fampiofanana eo ambanin'ny CIF dia mety ho mazoto na maharitra, tsy mitsaha-mitohy na tsy mifahatra.
Fanofanana ny fiofanana matihanina amin'ny maha-mpiasam-panjakana azy
Toy ilay mpiasa tsy miankina, ny mpampiasa dia azo atolotra amin'ny mpampiasa azy na ny fanjakana. Mety handray soa amin'ny Fialan-tsasatra (CFP) ny mpiasa na dia efa niasa nandritra ny taona 3 aza izy ireo. Ny CFP dia tsy afaka mihoatra ny telo taona noho ny asany, azo alaina amin'ny fotoana iray na manaparitaka amin'ny fiofanana matihanina.
Ny fisian'ny manampahefana amin'ny fanofanana dia hodinihana isam-bolana mba hanamarinana ny fandoavana ny alahelony. Ireo tombontsoa ireo dia mahatratra hatramin'ny 85% ny salan-karama, ary indraindray, ny fandaniana trano. Ny tompon'andraikitra ihany koa dia mandray soa avy amin'ny famatsiam-bola amin'ny fampiofanana matihanina amin'ny ampahany fiovana misy eo amin'ny sokajy mitovy (A, B na C). Amin'ity tranga ity dia mahazo tombony amin'ny fialan-tsofina izy izay tsy afaka mihoatra ny 6 volana.
HAMAKY Araho ny MOOC ao amin'ny Openclassroom mba hanatsarana haingana ny CV
Ny mpiasam-panjakana koa dia mahazo tombony amin'ny trosa isan-taona mandritra ny ora fiofanana arak'asa na ny Account Personal Training Account (CPF). izany fanampiana amin'ny famatsiam-bola ny fanabeazana ho an'ny olon-dehibe dia mahazo ny fangatahana ataon'ny manam-pahefana mba hanarahana karazam-pianarana sasantsasany ahafahana mampivelatra ny fahaiza-manao ilaina, hahazoana mari-pahaizana, lohateny na mari-pahaizana momba ny fahaiza-manao matihanina.
Famatsiam-bola ho an'ny fampiofanana amin'ny asa eo amin'ny tenany manokana
Ny olona miasa tena dia olona avy amin'ny kaontiny samirery na mpitantana orinasa. Azon'izy ireo atao ihany koa ny manaraka fiofanana arak'asa sy mahazo tombony amin'ny fanampiana ara-bola noho ny AGEFICE, ny Fikambanan'ny fitantanana ny famatsiam-bola ny fiofanana ho an'ny mpitarika orinasa. Mba hahazoana tombony amin'ity fanampiana ara-bola ity dia mila miasa amin'ny sehatry ny varotra, indostria na serivisy aloha ianao, tsy maintsy voasoratra anarana miaraka amin'ny URSSAF ao anatin'ny kaody NAF ihany koa. Ireo mpiasa miasa tena mendrika hahazo famatsiam-bola dia hahazo tombony amin'ny valin-karama fampiofanana 2 euro isan-taona.
Ho an'ireo dokotera liberaly, ny Fikambanana FAF-PM na ny Fikarakarana ny Fikarakarana ara-pahasalamana dia mitaky fandraisana anjara amin'ny dokotera ao amin'ny 0,15% amin'ny tahan'ny fitrandrahana ara-tsosialy isan-taona. Misaotra an'io sanda io, ny dokotera dia afaka mampiofana vondrona maimaim-poana miaraka amin'ny fikambanana Continuing Medical Education (CME). Ny FAF-PM dia manampy amin'ny dokotera maniry hanatrika ny fiofanana manokana, hatramin'ny 420 euros isan-taona sy ny mpitsabo. Ny farany dia afaka manaraka atrikasa siantifika na manomana DU, fahaiza-manao.
Ho an'ireo asa libérialy hafa dia miankina amin'ny Fund Interprofessional for Professional Liberal (FIF-PL) izy ireo. Tsy maintsy voasoratra anarana amin'ny URSAFF ianao ary manana kaody NAF hahazoana tombony amin'ity fanampiana ara-bola ity. Araka ny fanavaozana ny fampiofanana amin'ny asa, ny komisiona dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana vola na tsy fanomezana ny fanampiana ara-pampianarana ao amin'ny FIF-PL. ny tompon'andraikitra dia tokony hanolotra fangatahana amin'ny tranonkalan'ny Tahiry, miaraka amin'ny teny iray ho an'ny fanofanana. Ny famatsiam-bola ho an'ny fampiofanana dia amin'ny sehatra rehetra.
Fanatanterahana ny fampiofanana momba ny fampiofanana
Ny mpanakanto mpandahateny na ny teknisiana maneho ny fahalalahana dia afaka mahazo ny fialan-tsasatra (CIF) ary afaka mandray soa avy amin'ny manampy amin'ny fanofanana ny fampiofanana. Ny famatsiam-bola ho an'ny fampiofanana dia ampahany na totalina miankina amin'ny fotoana niasana. Ny Performance Insurance Insurance (AFDAS) dia hanampy ny intermittent hahazo famatsiam-bola na handoavana ny saram-panofanana rehetra raha toa ka ambany na mitovy amin'ny 150% amin'ny karama farany ambany ny karaman'ny intermitant. Raha voaofana miaraka amin'ny CIF ny intermittent dia hanana ny toeran'ny mpiofana momba ny fampiofanana matihanina izy ary homen'ny AFDAS.
Famatsiana ny fampiofanana matihanina, toro-lalana mahomby Aogositra 16th, 2018Tranquillus
Teo alohaNy tolotra amin'ny aterineto tsara indrindra amin'ny fandefasana rakitra lehibe tsy misy fisoratana anarana.
manarakaLasa mpikirakira fikarohana Google
Vidiny mora sy lohahevitra rehetra!
Tuto.com: Courses amin'ny fianarana ara-tsosialy mba hampiofanana ny sehatry ny harona.
Mianara finaritra amin'ny sehatra e-fianarana ety amin'ny SKILLEOS
Ataovy fiasa amin'ny fiofanana momba ny horonan-tsary momba ny Elephorm ny Passion-nao